Iswiidhan oo wareeysigii ugu horeeyay la galaysa Julian Assange - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Julian Assange ayaa ilaa 2012:kii isku qarinayay safaarada Ecuador ee magaalada London. sawir: Kirsty Wigglesworth
Iswiidhan oo wareeysigii ugu horeeyay la galaysa Julian Assange
Claes Aronsson:"Caafimaadka Assange wuu liita"
La daabacay måndag 14 november 2016 kl 12.14
Maanta 11:ka duhurnimo ayey Iswiidhan wareeysigii ugu horreeyay la galaysa Julian Assange oo muddo afar sanno ah ku sugnaa safaarada Ecuador ee magaalada London si aan loogu masaafurin Ameerika amba Iswiidhan.
Julian Assange ayaa lugu tuhmaya in sannadkii 2010: falal kufsi la xidhiidha ka geeystey Iswiidhan.
Xeer ilaaliye Marianne Ny ayaa ku faraxsan in la siiyay fursad ay ku wareeystaan Assange madama baadhitaankan natijo laga gaadhin ilaa markii kiiska la furay 2010:kii.
Ingrid Isgren madaxda xeer ilaaliyaasha kiiskan iyo shakhsi ka socda booliska Iswiidhan ayaa ka qeeyb galaya wareeysiga maanta laga qaadayo Julian Assange.
Sido kale ayey dawladda Ameerika doonaysa in iyaga loo dhiibo Julian Assange oo lugu haysto dhowr dembi. Assange ayaa ah asaasihi bogga Wikileaks halku warbixin sir ah ku bandhigay. Boggan ayuu dhowr dokumentii oo ku saabsan sirta militariga Ameerika ku daabacay. Assange ayaa dabeetana u baxsaday safaarada waddanka Ecuador ee ku yaala magaalada London halku ilaa 2012:kii joogay.
Claes Aronsson weriye ka hawlgala Raadiyaha Iswiidhan l´aanta Ekot oo dhowr sanno kiiskan isha ku hayay islamarkaas na la kulmay Assange ayaa sidan ka sheegaya kulankoodi.
-Markii aan Assange la kulmay laba sanno ka hor islamarkiiba waxaa ii cadaatay in caafimaadkiisu liito. Ta kale ayaa ah in aanu helin fursad uu caruurtiisa ku arko wakhtigii uu safaaradan isku qarinayay. Barnaamij ay Uppdrag granskning ee telefishinka la iska daawado ee SVT ka sameeysay ayaa laga ogaaday ka dib baadhitaano laga qaaday Assange in arrinkani sameeyn xun ku yeeshay caafimaadkiisa, ayuu sheegay Claes Aronsson mar u saaka wareeysi la galay barnaamijka P1-morgon.
Aronsson ayaa sheegay in saamiga dheecaanka laga qaadi karo Assange maanta hadii uu ogolaado.
Qareenka Julian Assange Per E Samuelsson ayaa loo diidayin u ka qeeyb galo wareeysigan.
-Sababta ay igu diideen ma garanayo, hasayeeshe waxaan rajeeynaya in aan joogo wareeysiyada kale ee macaamilkeeyga lala galayo todobaadkan , ayuu sheegay.